an-trano > Tapakila fiaran-dalamby OBB mora ary vidiny fitsangatsanganana
Eto ianao no afaka mahita ny fampahalalana rehetra momba Tapakila fiaran-dalamby OBB SY Vidin'ny fitsangatsanganana OBB ary tombony.
6. Inona no tsy mampitovy ny faneva, Komfort, ary Sparschiene ao amin'ny OBB 7. Misy famandrihana OBB ve
Ny OBB dia sariaka be amin'ny tontolo iainana, SY 100% ny herin'izy rehetra dia avy amin'ny angovo azo havaozina.
Ny fiaran-dalamby OBB matetika no tao Vienne – Graz, Salzburg – Vienne, Linz – St. Polten, Graz - Salzburg. Azonao atao ihany koa ny mankany amin'ny firenena mifanolo-bodirindrina ao Eoropa mampiasa fiaran-dalamby OBB.
isa 1: Soraty mialoha araka izay tratranao ny tapakila OBB anao
isa 2: Fitsangatsanganana amin'ny OBB mandritra ny fotoana an-tampony
isa 3: Alefaso ny tapakilan'ny OBB rehefa azonao antoka fa ny fandaharam-pizahan-tany
isa 4: Vidio ny tapakilan'ny OBB anao amin'ny Save A Train
Ny tapakila OBB dia manomboka amin'ny € 1,5 ka hatramin'ny avo 49 € mandritra ny dia fiaran-dalamby. ny vidin'ny tapakilan'ny lamasinina OBB Miankina amin'ny karazana tapakila fidianao ary rehefa misafidy ny handeha ianao:
Malagasy 1,50 € – € 51 2,40 € – € 100
Inona no tsy mampitovy ny faneva, Komfort, ary Sparschiene ao amin'ny OBB?
Ny toeram-piantsenana sasany dia manana fampisehoana elektronika izay manambara ny fananganana ireo lamasinina. bebe kokoa, Ampiasao ireto mba hizaha ireo zina misy ny isan'ny mpanazatra ny lamasinina rehefa tonga ny lamasinina.
ianao afaka Book ny fantatroamin'ny mialoha an-trano OBB trains for 3 euro. ianao will manovoza seza aorian'ny famandrihana.
Te hampidirina amn'ny tranokalanao ity pejy ity? kitiho eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-obb%2F%0A%3Flang%3Dmg – (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code), Na azonao atao rohy mivantana ao amin'ity pejy ity.